Ogaden News Agency (ONA) – Machadka Cilmi-baadhista IHASA oo la Shiray Jaaliyadda Ogadenia San Diego
Machadka Cilmi-baadhista IHASA oo la Shiray Jaaliyadda Ogadenia San Diego
San Diego: Malintii Axadda ahayd ee bisha September 25, 2011 waxaa magaalada San Diego ee gobolka California lagu qabtay shir si heer sare ah loosoo agaasimay oo ay marti ku ahayd hay’ada Mac’hadka Cilmi Baadhista Geeska Africa ee loo yaqaano Intitue for Horn of Africa Studies and Affiars “IHASA”.
Mac’hadkan oo ay xaruntiisu tahay gobolka California ee wadanka Maraykanka wuxuu isu taagay inuu cilmi baadhis qota dheer ku sameeyo dhibaatoyinka baaxada leh ee ka jira geeska Africa siiba dhulka Ogadenia. Mac’hadkan ayaa ah mid aan siyaasi ahayn ujeedadiisuna tahay sidii xal waara iyo nabad cadaalad ku dhisan loogu soo dabaali lahaa shacabka dulman ee Soomaalida Ogadenia.
Ujeedada shirkan ayaa wuxuu ahaa maadaama uu ururkani yahay mid Jaaliyadeed “Community Organization” in markasta ay la tashadaan shacabkooda, kalana war qaataan. Siiba socodaalkoodii horaantii bishan (September 7-14) ay ku tageen Washinton DC.
Madasha shirka ayaa waxaa soo buux dhaafiyay qaybaha kala duwan ee ay ka koobantahay Jaaliyadda Soomaalida Ogadenia ee magaalada San Diego sida Aqoonyahanka, Odayaasha, Siyaasiyiinta, Hooyooyink,a Culumo Awdiinka, Dhalinyarada iyo dhamaanba ururada bulshada ee ka jira magaalada San Diego.
Furitaankii shirka ayaa waxaa dad weynihii soo dhaweeyey guddoomiyaha Jaaliyadda Mudane Abdirahman Mohamud Sheikh Abdi (Hollywood) oo isagu u mahad celiyey dhamaan marti sharaftii kasoo qayb gashay shirka. Isla markaana si gaar ah ugu mahad celiyey mac’hadka kuna dhiiri galiyey iney sii wadaan hawsha adag ee ay u hayaan shacabkooda. Waxaa kadib microphone lagu soo dhaweeyey sheikh Abdiwahab oo aayadaha qur’aanka kadib wacyi gaaban usoo jeediyey dad weynihii.
Waxaa kadib barnaamijka lagu wareejiyey guddoomiyaha Mac’hadka IHASA Mudane Xamse Xaji Warfaa oo isagu mahad celin kal iyo laab ah kadib si qoda dheer uga hadlay ujeedadii loo aas aasay iyo waxqabadkii Mac’hadkan mudadii uu jiray. Waxaa uuna so bandhigay talaabooyinkii ay ku talaabsadeen oo runtii ahaa kuwa waa weyn oon halkan lagu soo koobi karin. Mudane Xamse ayaa dad weynihi usheegay inay hawshan isutaageen kadib markii ay umuuqatay in tariikhada Ogadenya si khaldan looga turjumo oo intabadan dad aan ehel u hayan qadiyada ay si xaqiiqada ka fog wax uga qoraan. Waxaa guul iyo farxad ah in maanta Mac’hadkani awood u yeeshay inuu soo saaro kitaab “book” ka kooban 12 qaybood oo taariikhda Ogadenia dhinac walba ka taabanaya. Maantana buugan laga heli karo aduunka oo dhan, diyaarna u yahay suxufiyiinta iyo cidkasta oo rabta iney soo tabato taariikhda Ogadenia.
Shirkan ayaa isna waxaa khadka talefoonka kaga soo qayb galay Mudane Mustafa Hassan oo ah Director of Advocacy for IHASA isla markaana ah Executive Director of Community Organization ee gobolka Minnesota.
Waxaa uu Mustafa si qodo dheer uga hadlay socdaalkii ay horaanta bishan ku tageen Washington DC iyo wax yaabihii ay kala kulmeen. Waxaa uuna kusoo gunaanaday dad weynihiina u sheegay in siyaasadda geeska Africa isbadashay arrinta shacabka Ogadeniana ay maanta miiska saaran tahay.
Ugu dambayn Jaaliyadda Soomaalida Ogadenia ee San Diego ayaa mahad balaadhan halkan uga celinaya Mac’hadka IHASA iyo madaxdeedii shirkan kasoo qayb gashay sida wanaagsan ee ay akhbaarta ula qaybsadeen.
Ogaden American Community of San Diego